न्यायाधीश सिन्हाकाे प्रश्न, सरकारले फेरि विघटन गर्दियो भने ? - नेपालबहस
न्यायाधीश सिन्हाकाे प्रश्न, सरकारले फेरि विघटन गर्दियो भने ?
| १३:०४:५८ मा प्रकाशित
२९ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा जारी बहसमा प्रधानमन्त्रीतर्फबाट आज बाबुराम दाहाल लगायतका अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । यस क्रममा न्यायाधीश र अधिवक्ताहरुबीच प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सवाल जवाफ भएको छ ।
बहसका क्रममा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले चुनाव भएपछि फेरि विघटन दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहेको र त्यसो भएमा के हुने भनी प्रश्न गरेका छन् । संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटउपर बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता बाबुराम दाहाललाई उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
‘यदि चुनाव भयो, तर दुई तिहाइ मत प्राप्त भएन भने त्यो बेला विघटनको अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?’ उनले जिज्ञासा राखे । जवाफमा अधिवक्ता दाहालले विघटन भन्नेबित्तिकै डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो कल्चर कस्तो भयो भने आफैँ पदमा पुर्‍याउने, आफै खुट्टा तान्ने, ? तर, सिन्हाले उनलाई प्रश्नभित्र रहेर बहस गर्न आग्रह गरे ।
न्यायाधीश सिन्हाले थपे, ‘चुनाव भएको १/२ महिनामा फेरि विघटन गर्छ भने देश कतातिर जान्छ ? हाम्रो संविधानको निष्कर्ष यही हो ? अधिवक्ता दाहालले जवाफमा भने, ‘जनताले ५ वर्षका लागि म्यान्डेट दिएको, काम गर्न दिनुपर्छ । पहिला नै खुट्टा तान्छन् भन्ने छैन । मान्छेले गर्ने कामै होइन त्यो । त्यो फेरि यो अवस्था हुन्छ भन्ने छैन नि !’
पशुपतिमा जलहरी नराख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश १ दिन पहिले
ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने तर फैसला कार्यान्वयन गर्ने १ दिन पहिले
सर्वोच्चकाे फैसला अघि प्रधानमन्त्रीका चार परिदृष्य २ दिन पहिले
सर्वोच्चले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको खबर सुन्दा रोगै हराए झैं भो : डा.भट्टराई २ दिन पहिले
सर्वोच्चको फैसलामा के छ ? हेर्नुहोस् बिस्तृत विवरण २ दिन पहिले
सुन्दरीजलस्थित सुरुङको भित्री ढोका बन्द गरियो १० मिनेट पहिले
कांग्रेसले तत्काल कुनै पक्षसँग सहकार्य नगर्ने : नेता केसी ३५ मिनेट पहिले
फागुन २० गते नेकपाको नाम विवादमा फैसला हुने ४७ मिनेट पहिले
एकैपटक ३१ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन ५० मिनेट पहिले
ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक आज नबस्ने ११ घण्टा पहिले
१०६ मेगावाटकाे जगदुल्ला जलविद्युत् निर्माण हुँदै, लागत कति ? ७ घण्टा पहिले
राष्ट्रिय खाद्य बैंकले आईपीओ निष्कासन गर्ने ११ घण्टा पहिले
नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणको काम तीव्र रुपमा ७ घण्टा पहिले
कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज बस्दै ११ घण्टा पहिले
निर्धन उत्थानको १३.६८ प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन ३ दिन पहिले
ओलीले देशलाई नै विघटनको बाटोमा पुर्‍याए : प्रचण्ड २ दिन पहिले
गरिमा विकास बैंकको ‘गरिमा सजिलो अटोलोन’, ८.७५ % ब्याजदरमा ८० प्रतिशत कर्जा पाईने ७ दिन पहिले
राष्ट्रिय महिला लिग : एपीएफकाे अपराजित यात्रा कायम २ हप्ता पहिले
आज दोस्रो दिन २८ हजारले खाेप लगाए ४ हप्ता पहिले
शान्तिबाटिकामा जसपाको विरोध प्रदर्शन ४ दिन पहिले
सङ्गीत अभ्यास र साधनालाई विश्राम दिएन गायक रामजी नेपालीले ४ हप्ता पहिले
डार्विनको हवाई अड्डामा सुमित र कुसुमको मर्मस्पर्शी अभिनय ४ महिना पहिले
माटोको ढिस्कोले पुरिएर स्याङ्जामा एक जनाको मृत्यु, २ जना घाइते ! ५ महिना पहिले
जिम्मेवार व्यक्तिबाटै हुँदै लकडाउन उल्लङ्घन ११ महिना पहिले
कोरोना नियन्त्रणका लागि पाँच लाख ८० हजार सहयोग १० महिना पहिले